Matthijs De Ligt oo ka warbixiyay xiliga la go’aamin doono kooxdiisa cusub ee xili ciyaareedka soo aadan – Gool FM
Matthijs De Ligt oo ka warbixiyay xiliga la go’aamin doono kooxdiisa cusub ee xili ciyaareedka soo aadan
(Yurub) 26 Maajo 2019. Xiddiga da’ada yar ee reer Holland iyo kooxda Ajax ee Matthijs De Ligt, ayaa shaaca ka qaaday xiliga la go’aamin doono kooxdiisa cusub uu ku biiri doono suuqa xagaaga ee soo socda.
Kooxaha Barcelona iyo Manchester United ayaa ilaa iyo haatan ah kuwa ugu cad cad ee lala xiriirinayo adeega daafaca reer Holland iyo kooxda Ajax ee Matthijs De Ligt, kaddib marka uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee xagaaga.
Hadaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa daabacay wareysi uu maanta bixiyay Matthijs De Ligt wuxuuna yiri:
“Horyaalka Premier League waa tartan adag, sidoo kale kan Spain ee La Liga”.
“Kooxdeyda cusub? Ma jiraan waxaan ka ogahay ilaa iyo haatan mustaqbalkeyga”.
“Waxaan ciyaari doonaa marka hore labada kulan xulkeyga qaranka ee Holand, kaddibna waxaan go’aansan doonaa mustaqbalkeyg iyo kooxdeyda cusub ee xili ciyaareedka soo aadan” ayuu hadalkiisa ku soo xiray daafaca dahabiga ah ee Matthijs De Ligt.
Xiddigihii hore ee Manchester United ee 1999 oo 5-0 kaga badiyay Halyeeyadii hore ee Bayern Munich (Daawo)
Kooxda Man United oo isaga baxday doonista Matthijs de Ligt iyo difaaca ay diiradeeda u weecisay oo daaha laga qaaday